माओवादी महाधिवेशन– प्रतिनिधिको अपेक्षा जनतासँग जोड्ने योजना | रक्त न्युज
माओवादी महाधिवेशन– प्रतिनिधिको अपेक्षा जनतासँग जोड्ने योजना
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटनको दुई घण्टा पहिले पनि मूलगेट बनाउने चटारो थियो । माओवादी कार्यकर्ता आइतबार दिउँसो सवा २ बजिसक्दा पनि महाधिवेशनस्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मूलगेट सजाउन व्यस्त थिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका तस्बिर, पार्टीको चुनाव चिह्न र महाधिवेशनको लोगोवाला झन्डा टाँस्न कार्यकर्तालाई भ्याइनभ्याई थियो । अर्थमन्त्रीसमेत रहेका संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्मा व्यवस्थापनबारे जानकारी लिँदै दौडधुप गरिरहेका थिए ।
व्यवस्थापनमा खटिएका कार्यकर्ताले शनिबारै प्रज्ञा प्रतिष्ठान सिंगारिसकेका थिए तर शनिबार साँझ बसेको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनको सट्टा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिदियो । जसका कारण पुराना प्रचार सामग्री र प्रतिनिधिका लागि तयार पारिएका परिचयपत्र अर्को बनाउने बाध्यता आइलागेको थियो । पार्टी नेतृत्वको निर्णय अक्षमताका कारण आफूहरूलाई तनाव भएको व्यवस्थापनका सदस्यहरूको भनाइ थियो ।
महाधिवेशनस्थलमा पार्टी झन्डा, चुनाव चिह्न, महाधिवेशनको लोगोसँगै अध्यक्ष दाहालको तस्बिर राखिएको थियो । सरोबरी रूपमा यी सामग्रीको प्रचार गरिएको थियो । एमालेको विधान महाधिवेशन र महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तस्बिर राखिएजस्तै प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिसरमा अध्यक्ष दाहालको पूर्णकदको ‘कटआउट’ राखिएको थियो । जसको छेउमा उभिएर प्रतिनिधि र कार्यकर्ताले तस्बिर खिचाइरहेका थिए ।
माओवादी महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी प्रचार गरिएको र लिइएको नाम अध्यक्ष दाहालकै थियो । माओवादीमा त्यसरी नाम लिइने दोस्रो नेता दूरदूरसम्म पनि नभएको त्यहाँको प्रस्तुतिले देखिएको थियो । कलाकारले गाउने गीत, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवसम्मका भाषणमा अध्यक्ष दाहालको मात्रै चर्चा गरिएको थियो । पार्टीको नीति कस्तो हुने, आगामी कार्यदिशा के हुने, परिवर्तनको नेतृत्व गरेको भनिएको पार्टी संसद्मा तेस्रो स्थानमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्नुको सट्टा मातृका यादव, नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि कार्यक्रम सञ्चालक जनार्दन शर्मासम्मले व्यक्तिकै बखान गरिरहेका थिए । दाहालको सबैभन्दा बढी बखान गर्नेमा शर्मा नै थिए ।
महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालको यस्तो चर्चा भइरहँदा प्रतिनिधिहरूले भने पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने योजना अगाडि सार्नुपर्ने बताएका छन् । माओवादी सुधार्नका लागि आफ्ना एजेन्डा लिएर यहाँसम्म ल्याउनेसँग जोडिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । ‘माओवादीले जसलाई भरोसा गर्नुपर्ने हो र जसलाई आधार ठान्नुपर्ने हो, त्यो जमिन भत्कियो, सबैभन्दा निमुखा जनता जसले हामीलाई यहाँसम्म ल्याए, उनीहरूलाई भुलेजस्तो गर्‍यौं । हामीले जो हाम्रा थिएनन् उनीहरूलाई समात्न खोज्यौं । त्यसो हुँदा हामी अलपत्रजस्तो भयौं,’ माओवादी कसरी सुध्रिन्छ भन्नेबारे केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटाको भनाइ थियो, ‘हाम्रो जमिन जहाँ हो त्यहाँ टेक्नुपर्छ, यसबारे समीक्षा गर्छौं । हिजोको जनसम्बन्ध कार्यशैली कहाँ गयो ? वर्गउत्थान किन भयो ? भन्ने प्रश्न छन् । तिनको उत्तर व्यवहारमा दिनुपर्छ ।’
म्याग्दीबाट प्रतिनिधि बनेर आएका प्रतिनिधि गोविन्द पौडेलले माओवादीलाई सुधार्नका निम्ति राजनीतिक कार्यदिशा र विचारको सुधार गर्नुपर्ने बताए । ‘सही राजनीतिक कार्यदिशाको निर्माण गर्नुपर्‍यो, मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवादमा टेकेर सही राजनीतिक कार्यदिशालाई अगाडि बढाउन सके माओवादी अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘माओवादीसँग अहिले चुनौतीभन्दा अवसर धेरै छन् । संघीय गणतन्त्र नेपाल र परिवर्तनको अपनत्व माओवादीको हो तर जसले यसका लागि लडेनन् उनीहरूले राज गरिरहेका छन् भन्ने जनतालाई बुझाइदिए मात्रै पनि माओवादीसँग जनता जोडिन्छन् ।’
माओवादीले गठबन्धन र पार्टी एकताका नाममा पार्टी संगठनमा ध्यान दिन नसक्दा कमजोर भइएको भन्ने प्रतिनिधि पनि छन् । डडेलधुराकी प्रतिनिधि कलावती भाटले भनिन्, ‘गठबन्धन र माओवादी–एमाले एकता तथा विभाजनबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहदेखि नै आर्थिक सशक्तीकरण जबसम्म हुँदैन तबसम्म जनतामा जान गाह्रो हुन्छ । आर्थिक विकास, शिक्षाका मुद्दाहरूलाई अगाडि राखेर जानुपर्छ ।’
संविधान निर्माण, व्यवस्था परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दा पनि माओवादी किन पछि पर्‍यो भन्नेबारे समीक्षा गर्नुपर्ने प्रतिनिधि नरेन्द्र न्यौपानेको भनाइ थियो । ‘हामीले जनतालाई छोड्यौं कि ? जनताकहाँ हाम्रो संगठनलाई पुर्‍याउने सन्दर्भमा कमी भयो कि ? हाम्रो लवाइखवाइमा समस्या भयो कि ? नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले समीक्षा गरेर जाने हो,’ उनले भने, ‘आजको परिस्थितिमा समृद्धि परिवर्तन र समाजवादका निम्ति हामीले लिने लाइन के हो भन्ने कुरामा क्लियर गर्न नसक्दा यो परिणाम आएको हो कि भन्ने लाग्छ ।’ अरू पार्टीसँग एकता गलत कुरा नभए पनि विचारका आधारमा एकता गर्न सकिए पार्टी संगठन मजबुत हुने उनको भनाइ थियो ।
सुनसरीबाट आएका प्रतिनिधि शिवकुमार डाँगीले माओवादी नेताहरू रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । ‘नेपाली जनताले चाहेको जुन शान्ति र समृद्धि हो त्यो दिशामा पार्टीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेताहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्‍यो र त्यसको अनुभूति जनतामा जान सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘रोजगारीको भयावह स्थिति छ, यो समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्‍यो । जनताले जीवनस्तरमा परिवर्तन चाहेका छन्, त्यसका निम्ति माओवादीले योजना ल्याएर एकाकार हुनुपर्छ । नारामात्रै दिने माओवादी होइन, काम गर्ने माओवादी चाहिएको छ जनतालाई ।’
नामको नयाँ पार्टी नभई वैचारिक रूपमा माओवादीलाई नयाँ पार्टी बनाउनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य रेणु चन्दको भनाइ थियो । ‘नेकपा विघटनपछि एउटा परिस्थितिबाट हामी आएका छौं । अहिले जनतालाई कसरी वैचारिक रूपमा नेतृत्व गर्ने भन्ने हो । वैचारिक रूपमा थप स्पष्टताका साथ जनतामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । विश्व परिवेश र विज्ञान तथा प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई जनतासँग कसरी जोड्ने भन्ने योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले सोमबार बन्दसत्रमा आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन राखेपछि प्रतिनिधिहरूले त्यसमाथि छलफल गर्ने बताइएको छ । छलफलका क्रममा प्रतिनिधिले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने योजना ल्याउन सुझाव दिने बताएका छन् ।ekantipur
अघिल्लो लेखमामाओवादी महाधिवेशन : आजदेखि बन्दसत्र
अर्को लेखमासुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा वर्षासँगै हिमपात, राजमार्ग अवरुद्ध